Muqaawamada Iyo Maleeshiyaatka Xuuthiyiinta Oo Ku Dagaalamay Taciz. – Bogga Calamada.com
Muqaawamada Iyo Maleeshiyaatka Xuuthiyiinta Oo Ku Dagaalamay Taciz.
July 30, 2016 11:28 am Views: 6
Wararka ka imaanaya wadanka Yemen ayaa sheegaya in dagaallo culus ay dib uga qarxeen inta badan magaalooyinka iyo deegaanada ay isku hor fadhiyaan maleeshiyaadka xuuthiyiinta shiicada ah iyo dagaalyahanada muqaawamada ee dawaaqiidda carbeed taageerada ka helaya.
Dagaallada ugu culus ayaa ka socda magaalada Taciz ee bartamaha wadanka Yemen, xoogag suniyiinta muqaawamada ayaa shalay weeraro culus ku qaaday saldhigyada maleeshiyaadka xuuthiyiinta iyo kuwa Cali Cabdalla Saalax ku leeyihiin magaalada Taciz kadibna waxaa qarxay dagaal culus oo labada dhinac u dhaxeeya.
Bayaan kasoo baxay taliska xoogaga muqaawamada ayaa lagu sheegay in dagaalka ay ku dileen 5 ka tirsan dagaalyahanada Xuuthiyiinta islamarkaana dagaalladu wali socdaan.
Goob joogayaal la hadlay wakaaladaha wararka ayaa sheegay in dhimasho iyo dhaawac ay dadka shacabka kasoo gaareen dagaalladii shalay islamarkaana ay adag tahay in goobaha caafimaadka lageeyo sababa laxariira dhammaan wadooyinka magaalada oo ah kuwa xiran.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in 5 qof shacab ah ay ku dhinteen suuqa lagu magacaabo Najdi qasiim ee bartamaha magaalada Taciz kadib markii kooxaha xuuthiyiinta ay Hoobiyaal ku garaaceen.